साहित्यमा मृत्युको परिकल्पना जायज,प्रचार शैली र नियत खराव - Ek Jamarko
Home / विचार / साहित्यमा मृत्युको परिकल्पना जायज,प्रचार शैली र नियत खराव
साहित्यमा मृत्युको परिकल्पना जायज,प्रचार शैली र नियत खराव
दुर्गा पंगेनी/काठमाडौ/ लोक गायक पुश्कल शर्माले सार्वजानीक गर्नुभएको नयाँ गीत "मलामी" को भिडीयो मा हजुरको अभिनय देखीयो ! हजुरले दिएको उनको मृत्यु भएको सम्वन्धी अभिब्यक्ती अत्यन्तै विवादमा परेको छ । यस संबन्धमा हजुरको विचार के छ ? भनेर हामीले भिडीयोमा देखीनुभएका अग्रज र समकालीन कलाकार हरु संग सोधेका थियौं । पढौं वहा हरुको जवाफ जस्ताको तस्तै ~
कोमल वली (चर्चित लोक गायीका एवं वरिष्ठ समाचार वाचीका ) ~ मेरो नाम मात्र होईन मन पनि धेरै कोमल भएको कारण यस पटक धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो । पुश्कल शर्माले लामो समय देखी कलाकारको मृत्यु संबन्धमा यौटा गीती नाटक जस्तो बनाउछु हजुरले सहयोग गर्दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेका थिए । म यौटा कलाकार भएको नाताले मैले गरेको सहयोग बाट कोही लाभान्वित हुन्छ र उसको राम्रो हुन्छ अथवा केही राम्रो कुरा बन्छ समाजको लागी भने तुरुन्तै सहयोग गरिहाल्ने बानी छ मेरो । फेरी पुश्कल शर्माले धेरै दिन पर्खीरहे । म विदेश तिर गएर फर्कदा पनि तारन्तार संपर्क गरेर दिदी हजुर लाई नै पर्खेको हुँ भनेर लामो समय सम्म अनुरोध गरेपछी मैले नाई भन्ने अवस्था रहेन र त्यो दृष्य मैले दिएकी हुँ । यसमा पुश्कलले म संग दुई वटा झुट बोले । पहिलो त नारायण रायमाझी दाई संग पनि अभिब्यक्ती लिन्छु भने । दोश्रो प्रचार शैलीमा कुनै चुक हुन दिन्न भनेका थिए । उनले नारायण रायमाझी दाईको अभिब्यक्ती पनि लिएनन र प्रचार शैली पनि राम्रो अपनाएनन । आफ्नै फेसबुकमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो मृत्यु संबन्धमा गलत अर्थ लाग्ने स्टाटस अपडेट गरेर प्रचारको सुरुवात गरे । प्रचारको नराम्रो शैलीको सुरुवात उनी आफैबाट हुनु गलत हो । त्यो अवस्थामा हेर्दा भिडीयो भित्र मेरो भुमीका जस्तो देखीए पनि आम बुझाईमा मेरो बोलाईले गलत अर्थ लाग्न पुगेकोमा दुखी छु ।
म यो समग्र अवस्था लाई दुई तरिकाले हेर्न चाहन्छु । यौटा कलाकार भएको नाताले समाजलाई प्रतिकुल प्रभाव नपार्ने गरी पुश्कल शर्माले आफ्नो जिवनी मा आधारीत जस्तोसुकै भिडीयो निर्माण गर्न पाउछ त्यो उसको निजी अधिकारको कुरा हो । तर भिडीयो निर्माणमा प्रयोग भएका दृष्य हरु उनले भेरीफाई गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेनन । मैले आफुभन्दा सानो भाई जुनीयर कलाकारको राम्रो होस भनेर विना पारिश्रमीक यहा सम्म की एक कप चिया समेत नखाई गरिदीएको काम सार्वजानीक गरिनु पुर्व मलाई एकपटक देखाईनु पर्थ्यो । त्यो दृष्य मैले हेर्न नपाई सार्वजानीक हुनु खेद जनक छ ।
अर्को कुरा मेरो जीवनमै म बोलेको कुराले कहिल्यै एस्तो पछुतो परेको थिएन । आज सम्म मैले बोलेको कुराले यस्तो नकारात्मक संदेश दिएको थिएन । स्टुडीयोमा यो दृष्य खीच्दा धेरै पटक टेक दिनुपर्यो । स्क्रीप्ट हेर्दैमा मैले यस्तोपनि बोल्नु र पुश्कल भनेर उनी संग अनिच्छा देखाएँ ।तर उनले धेरैपटक अनुरोध गरेपछी टार्न सकीन । खड्ग गर्बुजा दाई , पुरुसोत्तम न्यौपाने दाई रमेश विजी लगायत अहिलेका चर्चित भाई हरु कुलेन्द्र विक र राजु ढकाल हरु सम्मको अभिब्यक्ती आएको र नारायण रायमाझी दाईको अभिब्यक्ती पनि आउछ भन्ने भएपछी मैले दिएको दृष्य द्वारा निर्मीत भिडीयोले पक्कै समाज लाई सकारात्मक संदेश दिनेछ भनेर त्यो दृष्य खिच्न तयार भएकी हुँ । प्रचार गर्ने शैलीको लापरवाही को कारण र केही पुश्कलको झुटको कारण म समेत विवाद मा तानिएँ अहिले आईरहेका प्रतिकृया हेर्दा दुख लागेको छ ।
पुरुसोत्तम न्यौपाने (अग्रज लोक दोहोरी गायक) ~ निकै दिन देखी पुश्कलले यौटा क्लिप खिच्नुछ भनीरहेका थिए । मौका मिलेको बेलामा क्यामरा लिएर आए अनी उनकै मृत्यु भएको भनेर स्टेटमेन्ट दिन लगाए । सुरुमा त कस्तो अफ्ट्यारो लाग्यो । पछी केही हुदैन गलत अर्थ लाग्ने गरि भिडीयो बनाउदिन भनेर मलाई कन्भिन्स गरे उनले । अनी म उनले भने बमोजीमको बोलीदिएको हुँ । साहित्यमा मृत्युको परिकल्पना गर्न पाईन्छ । श्रद्देय नारायण गोपाल लगायत धेरै अग्रजका गीतमा मृत्यु या तत: सम्वन्धी आशय र दृष्य हरु फिल्माईएका छन । तर त्यहा गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरिएको थिएन । पुश्कल ले भिडीयो प्रचार गर्नको लागी जुन तरिका अपनाए त्यो खेद जनक छ । अरु यस बारेमा मेरो भन्नु केही छैन ।
~ (अग्रज गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेको आक्रोश अडीयो सहीत सुन्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । अडीयो श्रोत~ संचारकर्मी शिखर गजरकोटे को युट्युव: http://youtu.be/FmFHcvV_uVI )
रमेश विजी ( चर्चित सर्जक एवं महासचिव लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल)~ मलाई सुरुमा त्यो अभिब्यक्ती दिन मन थिएन । तर पुश्कलले त्यो बेलामा साह्रै कर गरे । अव पुश्कल जत्तीको कलाकार ले त्यो अभिब्यक्ती लाई त्यसरी दुरुपयोग गर्लान भनेर मैले त्यो समयमा सोचीन । एक किसीमले त हासो पनि लाग्यो मेरो भागमा परेको स्टेटमेन्ट खीच्दा म कतै पनि भाबुक बन्न सकीन । मृत्युको अभिब्यक्ती या श्रद्दान्जली दिदा स्वभाबैले अनुहारमा त्यो किसीमको सिरीयसनेस या भाबुकता आउनुपर्ने हो । मलाई हासो मात्र लागीरह्यो । गम्भीर भएर टेक दिन नसकेपनि मेरो मुस्कान सहितको श्रद्दान्जली उनीहरुले खिचेका हुन । दुरुपयोग हुने अर्थ लाग्ला भन्ने अनुमान सम्मपनि गरेको भए मैले त्यो अभिब्यक्ती दिने नै थिईन ।
साहित्यीक पाराले बुझ्दा गीतलाई म खोट लगाउदिन । मेरा पनि कतीपय गीत हरुमा मृत्युको परिकल्पना गरेको छु । पुश्कल ले भिडीयो तयार भएपछी रिलीज पुर्व एकपटक मलाई देखाउनु पर्थ्यो । त्यो देख्न मात्रै पाएको भए मैले मेरो अभिब्यक्ती त्यो हिसावले राख्न स्विकृती कदापी दिन्नथें । अर्को कुरा भिडीयोको अन्त्य जस्तो सुकै भएपनि उनले भिडीयोको प्रचार गर्न जुन शैली अपनाए त्यो एकदमै खेदजनक छ । आफ्नै निजी पेजमा सबैभन्दा पहीला उनी स्वयंले पुश्कल शर्माको मृत्यु भयो भनेर स्टाटस अपडेट गरे । त्यही स्टाटस लाई आधार बनाएर अनलाईन मिडीयाले समाचार बनाए । त्यो किसीमको स्टाटस राख्नु नै पुश्कल शर्माको नियतमा खोट थियो भन्ने आधार हो । कलाकार साथीको आग्रह टार्न नसक्ने मेरो सोझो पनको नाजायज फाईदा उठाए पुश्कल ले । यसमा मेरो गंभीर आपत्ती छ ।
पुश्कल भाईले दाई मलाई बाचुन्जेलको सम्मान र मायाले पुगेन । म मरेपछि गरेको सम्मान र श्रद्वाञ्जली पनि जिउदै हेर्न चाहन्छु । हजुर म भन्दा जेठो मान्छे सायद म मर्दा हजुर नहुन पनि सक्नु हुन्छ । मलाई हजुरकै मुखबाट मेरो मृत्यु पश्चात ब्यक्त गरिने सम्झनाका शब्दहरु सुन्न चाहन्छु। प्लिज दाई नाई नभन्दिनु । मेरो अन्तिम इच्छा छ । मेरो लाश अगाडि भएको कल्पना गरेर दुई शब्द भन्दिनुस् भनेर म बसेकै ठाऊमा आएर लम्पसार परे । मैले कति नाई नास्ती गरें तर उनले जिद्दी छोडेनन । मनै नलाई नलाई नबोली धरै पाईएन । अझै मैले वास्वविक जीवनमा यस्तो बोल्न नपरोस भाई समेत भने । स्वयं ब्यक्तिनै उपस्थित भएर मलाई जिऊदै श्रद्वाञ्जली दिनुस दाई भनेर अड्डि कसेपछि म के गरु हजुर ? दागबत्ति मागेको भएपनि दिनपर्नी अडान थियो उसको ।
मेरो सोझोपनलाई फाईदाका निमित्त गलत ढंगले प्रस्तुत भएको र सामाजिक बिचलन ल्याएको खबरले दुखि छु ।
हजुरहरुको गुनासो म सहुँला हजुरहरु पनि मलाई बुझिदिनु हुन अनुरोध छ ।
खड्ग गर्बुजा ( वरिष्ठ लोक गायक ) ~ मान्छेको नियत कसैले बुझ्न सक्दैन । दुरुपयोग को कुरा गर्दा त्यो मेरो क्लिप नियोजीत रुपमा लिईएको थिएन । अचानक आईपरेको अवस्थामा म बोल्दिएको हुँ । कथा बस्तुमा गलत अर्थ नलाग्ने गरी भिडीयो बनाउछु भनेर अनुरोध गरेको कारण म बोलेको थिएँ । भिडीयो हेर्दा समग्रमा ठिकै छ । अन्त्यमा सपना हो भन्ने पारीएको छ । तर जुन दर्शकले पुरा हेर्नुहुन्न वहा हरुले समाचार शैली र श्रद्दान्जली हेर्दा गलत बुझ्न सक्ने ठाउ छ । अर्को कुरा यो गीतको प्रचारको लागी जुन शैली अपनाईयो त्यो अत्यन्तै दुखदायी छ । आफ्नै प्रोफाईलमा आफै मरेको समाचार छपाउनु कलाकारीताको लागी एकदमै निन्दनिय कुरा हो । जुनसुकै दुर्दशा भोग्नु परेपनि यौटा कलाकारले त्यस्तो कहिल्यै नगरोस । बाकी यस बारेमा मेरो भन्नु केही छैन ।
राजु ढकाल (चर्चित लोक दोहोरी गायक)~ म मारुनी स्टुडीयो मा बसिरहेको थिएँ । देवी घर्ती ले समेत गाएको सिरीयस गीत जुन गीतमा आफै मरेको परिकल्पना गरिएको छ त्यसमा अभिब्यक्ती दिनु पर्यो भनेर पुश्कल ले अनुरोध गरेका हुन । त्यो बेलामा बसन्त थापा र कुलेन्द्र हरुले पनि त्यस कीसीमको अभिब्यक्ती दिनुभएको थियो । पछी गीत आउदा पुरुष आवाज मात्र आयो । मैले भिडीयो निर्माणमा समकालीन साथी लाई सहयोग होस भन्ने अभिप्राय ले त्यो दृष्य दिएको हुँ । त्यो हिसाबले भिडीयो पनि राम्रो बनेको छ । कहानिको अन्त्यमा पात्र सपना बाट ब्युझीनु र हामीले दिएका अभिब्यक्ती हरु सपना भएको देखाईनु गलत हो जस्तो लाग्दैन । तर गीतको प्रचार शैली अत्यन्तै नराम्रो भयो । पुश्कल शर्माको पेजमै उनको मृत्यु पुर्व त्यो गीत गाईएको भनेर जुन स्टाटस आयो त्यो खेदजनक छ । त्यसैलाई आधार मानेर अनलाई हरुले समाचार बनाउदा अवस्था झन विग्रन गएको हो । त्यसमा कस्को नियत खराब थियो भन्ने कुरा समयले प्रमाणीत गर्ला ।
कुलेन्द्र विक (चर्चित लोक दोहोरी गायक) ~ मैले सुरुमा गंभीरता पुर्वक लिईन । त्यहा ठट्टै ठट्टामा दृष्य हरु फिल्माईरहेका थिए । जिवीत साथीलाई कसरी श्रद्दान्जली दिनु भनेर मैले पुश्कल शर्मा अव हामी विच रहेनन भन्ने तरीकाले बोलेको हुँ । अझै बोल्थें होला तर बोल्दा बोल्दै विचमै भोली मेरो अभिब्यक्ती बिबादमा पर्छ की भन्ने सानो विचारको झिल्को दिमागमा नउठेको पनि होईन । तर समकालीन साथीले भिडीयो राम्रो बनाउनको लागी सहयोग माग्दा मैले नाई भन्न सकीन र दिएँ । भिडीयो सुरु देखी अन्त्य सम्म हेर्दा मेरो अभिब्यक्तीको दुरुपयोग भन्ने लाग्दैन किनकी अन्त्यमा त्यो सबै सपना रहेछ भन्ने देखाईएको छ । तर गीतको प्रचार शैलीको म खुलेर विरोध गर्दछु । पुश्कल शर्माकै पेज बाट सुरु भएको उनको मृत्युको अफवाह ले हाम्ले राम्रै सोचेर दिएको अभिब्यक्ती को पनि गलत अर्थ लाग्न गयो । मैले अरु कुनै नियत ले त्यो अभिब्यक्ती दिएको होईन । दर्शक दिर्घामा पर्न गएको भ्रमले मलाई पनि दुखी बनाएको छ । त्यसको लागी म आम दर्शक संग माफी माग्न चाहन्छु ।
यसरी नै लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केही जिम्मेबार पदाधिकारी हरु संग समेत हामीले यस बारेमा प्रश्न सोधेका थियौं । प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्यको हैसीयतमा रहेका पुश्कल शर्माले मच्चाएको यो स्क्याण्डल प्रति तपाई हरुको धारणा के छ र अवका दिनमा पुश्कल शर्माको प्रतिष्ठान प्रतिको जिम्मेबारी कस्तो रहनेछ भनेर ~ मेरो प्रश्नको जवाफमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चन्द्र शर्माको जबाफ यस्तो थियो ~
पुश्कल शर्मा जस्तो कलाकार प्रतिष्ठान भित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा कतिपय अवस्थाहरु लाई नजरअंदाज गर्दै उनलाई सुर्खेतमा केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार हुने बाटो खोलीएको थियो । उनले निर्वाचन जिते र प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन । विधानमा केन्द्रीय सदस्य नरहने अवस्थाको पनि परिकल्पना गरिएको छ । त्यो दफामा केही उपदफा हरु थप्न पर्ने आवस्यकता देखीयो । नैतीक पतन हुने कार्य गरेको, फौजदारी अभियोग प्रमाणीत भई सजाय पाएको र लोक संस्कृती तथा परम्परा माथी गंभीर कुठाराघात गरेको प्रमाणीत भएको अवस्थामा पनि संस्थाले कारवाही गर्ने र उक्त ब्यक्ती प्रतिष्ठान भित्र नरहने सम्बन्धी ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखीएको छ ।
केन्द्रीय अधिवेशनको पुर्व संध्यामा अव विधान संसोधन हुदा झुक्याएर कुनै अग्रज या समकालीनको नाम प्रयोग गरी आफ्नो फाईदाको लागी अरुको अभीब्यक्तीको दुरुपयोग गर्नु कुन अपराध भित्र अथवा नैतिक पतन या धोखाधडी अन्तर्गत त्यस्तो अवस्था लाई परिभाषीत गर्न के कस्तो निर्णय गर्नु पर्छ त्यो हामी निर्क्योल गर्छौं र कुनै निर्णयमा पुग्नेछौं । पुश्कल शर्मा द्वारा प्रतिष्ठानका अग्रज र समकालीन साथी हरुबाट लिईएको मृत्यु सम्बन्धी अभिब्यक्ती दुरुपयोग गरिएको विषय लाई प्रतिष्ठानले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
साहित्यमा मृत्युको परिकल्पना जायज,प्रचार शैली र नियत खराव Reviewed by Jamarko TV on सितंबर 13, 2016 Rating: 5